သင့်အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အခိုက်အတန့်တစ်ခု ကအဆင်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အိပ်မက်ထဲမှ အခမ်းနားဆုံးမင်္ဂလာပွဲကို အမှန်တကယ် ဖြစ်လာစေဖို့ LOTTE HOTEL က အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါရစေ။
မိမိကိုယ်ကို အလှပဆုံးသောသူတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဘဝအတွက် အရေးပါဆုံး အချိန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က အဆင်အသင့် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ရိုးရာအစဉ်မပျက် ဂန္ဓဝင်မြောက်သည့် မင်္ဂလာပွဲမှသည် ခေတ်မှီပြီးဆန်းကျယ်သော အပြင်အဆင်များဖြင့် အမျိုးမျိုးသော မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲပုံစံများအား ကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုပေးအပ်ပြီး မိမိတို့၏ တန်ဖိုးကြီးသော၊ အများနှင့်မတူသော ပန်းအလှဆင်ယင်မှု၊ ထိပ်တန်း ဟင်းလျာများနှင့် အစစအရာရာ အသေးစိတ်ဝန်ဆောင်ပေးမှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ခန်းမများ ကြည့်ရန်
TEL +82-51-922-1040 ခေါျရနျ
LOTTE HOTELS တွင်ကျင်းပသော မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
Lotte Family Club (Lotte ဟိုတယ်မိသားစုကလပ်)
အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတို့ကို အမြဲတမ်း ပြန်လည်ခံစားကြည်နူး စေရန်အတွက် အမှတ်တရနေ့အတွက် သီးသန့်ဖွဲ့ထားသော ကလပ်ဖြစ်ပါသည်။ LOTTE ဟိုတယ်မိသားစုကလပ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါက ရရှိလာမည့် အထူးဝန်ဆောင်မှု ခံစားခွင့်များဖြင့် သင်၏ အမှတ်တရနေ့များ အမြဲတမ်းပြန်လည် သတိရနေစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၁. ဧည့်သည်ပေါင်း ၃၀၀ နှင့်အထက်အတွက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကြိုတင်မှာယူပါက တစ်ညတာ အခမဲ့တည်းခိုခွင့် (မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲနေ့ သို့မဟုတ် မတိုင်ခင်တရက် အတွက်သာ)
၂. မည်သည့် Lotte Hotel တွင်မဆို ပျားရည်ဆမ်းခရီးအဖြစ် တည်းခိုနေသော သူများအတွက် အထူးနှုန်းထားများ ရှိပါသည်။
* ဟိုတယ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာမောင်မယ်တို့၏ ပျားရည်စမ်းခရီးစဉ်အတွက် Limousine ဇိမ်ခံ ကားဖြင့် လေဆိပ်သို့ အကြိုအပို့လုပ်ပေးမှု
လေဆိပ်သို့ Limousine ဇိမ်ခံ ကားဖြင့်အကြိုအပို့လုပ်ပေးခြင်း (ဧည့်သည်ပေါင်း ၃၀၀ နှင့်အထက်ကျင်းပခဲ့သော ဧည့်ခံပွဲအတွက်) ဖြင့် LOTTE HOTEL မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အထူးဧည်သည်တော် အတွေ့အကြုံ ကိုရယူလိုက်ပါ။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမတိုင်ခင် အစားအသောက်များကို ကြိုတင်မြည်းစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရွှေးချယ်ထားသည့် အရသာရှိလှသော အစားအသောက်များကို သင့် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲအတွက် ကြွရောက်လာကြသော အထူးဧည့်သည်တော်များအတွက်ပါ ပြင်ဆင်ပေးထားရုံသာမက
နွေးထွေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် LOTTE HOTEL မှာဆိုရင် မင်္ဂလာမောင်နှံတို့၏ မင်္ဂလာယူချိန် အခါသမယကို ပိုမိုတင့်တယ် လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။